Maalinta: Noofambar 9, 2017
Diiwaanada Dalxa ee Denizli Teleferik iyo Xirbiga
1,5 milyan oo qof ayaa isugu yimid Teleferik iyo Bağbaşı Plateau Denizli Denizli, oo ay dhistay Dawladda Hoose ee Magaalada Denizli si loo kobciyo nolosha bulshada ee dadka Denizli iyo in ay wakhti ku qaataan deegaannada ku xeeran dabeecadda. [More ...]
Dib-u-qiimeyn ku saabsan baabuurta ilmaha
Manisa, gaadiidka dadweynaha ee aragtida ah isku dayga abuurista xamuulka caruurta ee xamuulka caruurta ee aragtida Xarunta Isuduwaha Gaadiidka (UKOME) ayaa timid. Dib-u-wada hadalka ee arrinta, adkeynta in qaanuunku la xiriiro marin u helitaanka muwaadiniinta naafada ah [More ...]
Daryeelka Dhimashada ee Uludag Cable Line
Gaariga fiilada siiya Uludağ waxaa la daryeelay kahor xilliga qaboobaha. Shaqaaluhu waxay fuulaan ulo dhererkoodu yahay mitir dhererkoodu yahay 45, muwaadiniinta inay u adeegaan sida ugu dhaqsaha badan xilliga qabow, iyagoo is difaacaya, daryeela inta ugu badan [More ...]
Duqa magaalada Bursa Alinur Aktaş ayaa bilaabay howlihiisa maalinlaha ah ee dhulka hoostiisa. Duqa magaalada Aktaş, oo ka soo qaatay xarunta metrooga ee loo yaqaan 'Kestel Station' si loo ogaado dhibaatooyinka ka dhex jira gaadiidka dadweynaha, ayaa lahadlay muwaadiniinta oo helay macluumaadka ku saabsan dhibaatooyinka ay qabaan. [More ...]
Boostada TCDD ee Boostada OIZ
Saldhig xamuul-rar ah oo ku yaal aagga ku dhaw si loo yareeyo qiimaha gaadiidka ee xarumaha warshadaha ee ku yaal Aagga Wershadaha abaabulan iyo agagaarkeeda, ilaa heerka ugu hooseeya labadaba gudaha iyo dhoofinta iyo dhoofinta transit-ka. [More ...]
Denizli Cable Car iyo Bağbaşı Plateau, oo ay dhidibada utahay Dowlada Hoose ee Magaalada Denizli iyada oo ujeedku yahay kobcinta nolosha bulshada ee dadka Denizli isla markaana ka dhigaysa in ay waqti ku qaataan deegaannada iskuxiran ee dabeecadda, sanadkasta booqdayaasha 2 [More ...]
Sehit Er Ali Caddadka Baaskiilka waa la xidhan yahay Maxay tahay inuu ku sameeyo baako?
Shaqada waxaa loo bilaabay in lagu xaliyo dhibaatada daaqsinka ee 'Aliehit Er Ali Çelik Underpass' oo leh meel aad u muhiim ah dhibaatooyinka gaadiidka Torbalı. Torbalı waxay leedahay meel aad muhiim ugu ah dhibaatooyinka gaadiidka. [More ...]
Gaariga fiilada siiya Uludağ waxaa la daryeelay kahor xilliga qaboobaha. Shaqaalaha fuulaya dherarkoodu dhererkoodu yahay mitir dhererkoodu yahay '45 mitir' ayaa ah kuwa ugu taxadarka iyo taxaddi badan [More ...]
Qarsoonaanta qaboojiyaha waxaa lagu xalliyaa qashinka nostalgic
Khadka Antalya Matxafka-Zerdalilik ee ka shaqeeya hawada qaboojinta nooca tareenka ee nostalgia-ku-saleysan nooca hawada ah ayaa maalintaa ku xirnaa warbaahinta bulshada. Iyada oo qolka matoorka qaboojiyaha hawada lagu rakibay gaariga taraamka, isticmaaleyaasha warbaahinta bulshada ee sawiraya dalabka ayaa ka duwan. [More ...]
Polatlı YHT Gar Road Maxmud ah
Qeybta gaadiidka, oo leh qeybta ugu muhiimsan, kahor inta uusan tareenka dhulka qaadin rakaabka cufcuf yapa yapara wuxuu ka bixi lahaa dhul ilaa gees ilaa gees. Hada tareenadii saldhigyadaas hore waa matxaf. [More ...]
Guddoomiyeyaasha Kocaeli waxay doonayaan Adapazarı Express
Shaqaalaha ka shaqeeya Governorship of Kocaeli, Adapazarı Express dib ayey u bilaabaan, duulimaadyadii ku teedsanaa xaafadaha 42 Ho joojiya waxay rabaan in lagu daro Kocaeli Governorship sanado badan oo kuyaal bartamaha magaalada ayaa u adeegay Izmit. Maamulka dhowr sano ka hor [More ...]
Aktaş ma iska tuuri doonaa 2 million oo lagu kharash gareynayo line-ka T60?
Adigoo ka beddelaya su'aasha cinwaanka, wax yar baan weydiin karnaa; Suurtagal ma tahay in laga tago 'Qadka T2', kaas oo ka shaqeyn doona inta udhaxeysa Kent Square iyo Terminalka Baska ee 'Intercity Bus Terminal', kaas oo dhismihiisu socdo Wadada Yalova? Marka hore, bal aan waxoogaa macluumaad la wadaago; 130 [More ...]
RayHaber 09.11.2017 Warbixinta Shirka
Gawaarida nuuca nooca loo yaqaan 'DE 24000 nooca loo yaqaan' Nooca Gawaarida ayaa lahaan doona nidaamka celceliska microprocessor Slotted Nut ayaa la iibsan doonaa [More ...]
Ku-xigeenka Duqa Magaalada Caasimadda ee Turan Cakir, oo ku jira qaab dhismeedka Qorshaha Masterka Gaadiidka, dadka ku nool magaalada oo hadafkoodu yahay in la baabi'iyo himilooyinka gaadiidka, ayuu yidhi. Golaha Dawlada Hoose ee Magaalada Samsun 2017 Sanadka [More ...]